सातौँ इन्द्रियको लत जस्तै भो मोबाइल तरङ्ग - सगरमाथा साप्ताहिक
सातौँ इन्द्रियको लत जस्तै भो मोबाइल तरङ्ग
जाजरकोट जुनिचाँदै गाउँपालिका–४ लुहादमा फोनले काम नगरेपछि रुखमा चढेर फोन गर्दै स्थानीय । रासस
काठमाडौँ, कत्तिक १३ । नेपालको राप्ती अंचलको रुकुम जिल्ला सुबिधा र साधन भएको जिल्लामा गनिदैन I यो जिल्ला विकास ढिलो गरि पुगेको दूर्गम जिल्ला हो I तर, रुकुमकोटमा रहेको रुक्मेणी देवीको नामवाट रुकुम नामाकरण गरिएको '५२ पोखरी ५३ टाकुरी'को जिल्लाका रूपमा परिचित रुकुम जिल्लामा मोबाइलको " एप्स " अर्थात् सूचना भण्डारणको विद्युतीय थैली भनेर परिभाषित गर्न सकिने पद्धती वाट सर्वसाधारण लाइ जानकारी र सुविधा दिइने भएको छ । यो काम यसै कार्तिकको दोस्रो साता देखि मुसिकोट नगरपालिकाले शूरु गरेको छ I यसको, देखासिकी स्थानीय तहका अरु निकायले पनि शुरु गर्ने भएका छन् I नेपालको सुदूर क्षेत्रमा समेत मोबाइलको साम्र्याज्य यसरी फैलिन थाल्यो भने आखिर यो हो के भनेर बिबेचना गर्नु सामयिक नै हुन्छ I
साँचो, काइयो, मनीब्याग अनि मोबाइल नबोकी हिड्ने मानिस संसारमा विरलै होलान I सन् २००६ देखि मोबाइल दैनिक जीवनको स्थायी संसाधनका रुपमा प्रयोगमा आइरहेको छ I सिद्धान्तत; खासगरि हाते मोबाइल एउटा नितान्त निजी जीवनको साथी र आफ्नो निजी जीवनलाई अरुका सामू अभिव्यक्त गर्ने शस्त्रसमान संयन्त्र भनेर बिद्वानहरुले भन्ने गरेका छन् I मोबाइललाइ स्वभाव, सूचना र सम्पर्कको मूख्य आधार पनि भनिन्छ । धेरै कुरा एकै संयन्त्रवाट सम्पादन हुने भएकाले प्राविधिज्ञहरु यसलाई प्रबिधिको हाइब्रिड रूप पनि भन्दछन I अथवा मोवाइललाइ छैठौं इन्द्रिय पछिको सातौँ समेत कतिले भन्न थालेका छन् I
मोबाइल फोन के का लागि ? सजिलोका लागि ? सुविधाका लागि ? सूचनाका लागि ? सेवाका लागि ? शिक्षाका लागि ? रमाइलोका लागि ? भन्ने जस्ता प्रश्न बारम्बार उठ्न सक्छन I तर, यसको उत्तर कुनै खास एउटा कुरामा अट्न सक्दैन I अब त - मोबाइल कुन कुराका लागि , कहिले, कसका लागि , किन र कहाँ भन्ने प्रश्न रहेन I मोबाइल सबै कुरामा, सबै ठाउँमा र सबैका लागि अत्याबस्यक वस्तुको गणनामा परेको छ I अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले मोबाइल लाइ " प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तित्वका लागि अभिन्न साधन " भनेर व्याख्या गरेको छ I
मोबाइलमा ब्यापक सामाजिक अंतर्क्रियात्मक्ताको थालनी सन् २००५ मा प्रदर्शन शुरु गरिएका "एलिजाबेथ टाउन" र "ब्रोकन फ्लावर" नामक अमेरिकी चलचित्रमा पात्रहरुद्वारा लामो समयसम्म वार्तालापमा प्रयोग गरिएको बहुसंचार प्रणालीको पद्धतीवाट संचालित मोबाइलको संयन्त्रवाट प्रेरित भएर हुन् पुगेको हो I आहिले प्रयोगमा आइरहेका आधुनिक मोबाइलहरुका मोडलहरुले न्यूनतम पाँचवटा कामहरु जस्तो कि शब्द सम्प्रेषण, त्यसपछि श्रब्य दृश्य र शब्द तीनै कुराको एकसाथ सम्प्रेषण, तस्बीर तथा फिल्म छायांकन, वेब परिचालन, बिषयबस्तुको अन्न्वेषण र भुक्तानी लगायतका विविध सेवाको सूचनाको सम्प्रेषण र भण्डारण एकसाथ गरिरहने मोडलका मोबाइलको विकास गरिएका छन् I
यी प्रकारका मोडल पछि लगत्तै अर्को कस्तो नया मोबाइलका रूप वा मोडल ल्याउने भन्ने बिषयमा पनि निरन्तर काम भैरहेका छन् I पछिल्लो मोडेलको फोन कस्तो हुनेछ भनेर भन्ने नसकिने अवस्था छ I शुरुमा, टेलिफोन सेटको बैकल्पिक प्रकरणको हाते संस्करण वाट विकाश हुन् शुरु भएको मोबाइल क्रमश: घडी,क्यालकुलेटर, अखवार र अभिलेखको वैकल्पिक साधन हुदै अहिले बजार अनुसन्धान, पाठ्यक्रम, र टेलिभिजनको समेत विकल्पका रुपमा प्रयोग भैरहेको छ I मोवाइलको बहुउपयोग विस्तारका कारण हिजो अखवारहरु संकटमा परे झैं आउँदा दिनहरुमा टेलिभिजन च्यानलहरु संकटमा पर्दै छन्.I न्यु मिडिया अर्थात् मल्टिमिडिया, इन्फर्मेसन सुपर्हाइवे,डिजिटलाइजेसन, इन्टरनेट रेभोलूसन, न्यु इकोनोमी, डट.कम जस्ता सूचना प्रविधिका अनेक पद्धतिका विकास भएसंगै ती पद्धतीहरु मोबाइलमा आबद्ध हुने भएकाले यो हाते कम्प्युटरका रूपमा पनि विकास भएको छ I
धेरै पहिले मोबाइल फोनहरू वास्तवमा दुई-राउन्ड रेडियो थिए जसले कुराकानी गर्नको लागि आकस्मिक सेवाहरू संवाद गर्न र ट्याक्सी चालकहरूलाई मात्र अनुमति दिएका थिए । मोबाइललाई एकप्रकारको रेडियो तरङ्ग वाट संचालन हुने संयन्त्र पनि भन्ने गरिन्छ । जसमा प्रयोगकर्ताले रेडियो तरंग आवृत्ति भैरहेको क्षेत्रमा लिङ्कहरु बाट क्षेत्र भित्र सम्प्रेषण हुनेगरी टेलिफोन कलहरू प्राप्त गर्न सक्छ । मोबाइललाई उत्तर अमेरिकामा सेल फोन पनि भनिन्छ । मोबाइल एउटा सजिलै संग बोक्न सक्ने र लैजान सक्ने फोन हो ।मोबाइललाई विशेष गरि दुई भागमा विभाजन गरिएको छ ; स्मार्ट फोन र फीचर फोन (ननस्मार्ट फोन) ।
यसलाई उत्तर अमेरिकामा सेल फोन अर्थात् दोस्रो पुस्ताको संचार प्रबिधि भन्न थालियो I दोस्रो पूस्ताको प्रबिधि बिकास भएसंगै बिश्वब्यापिकृत मोबाइल प्रणाली अर्थात् जी एस एम को विस्तार भयो I यसको उद्देश्य अधिकतम दूरी र बाक्लो बस्तीसम्म प्रष्ट आवाजको सिद्धान्त थियो I अधिकतम सूचना अर्थात् डाटाहरू (मेघा,गेगा,टेरा,येटा,जेटा जस्ता (दुइ डिजिट इकाइको समूहका बिबिध क्षमतामा ) बाइट्समा भण्डारण गर्न सक्नु र उपभोक्ताबिशेषको निजि प्रयोजनका लागि मात्र बिकास गरिएको सूचनाहरु भण्डारण गर्न सकिने पातो अर्थात सीम वा स्मार्ट कार्ड पनि भनिन्छ - त्यो पनि एकसाथ परिचालन गर्न सकिने मोबाइलको विकास गरियो I
सुक्ष्मतम भण्डारण क्षमता भएको, चिटिक्क आकारको , बेगिलो र धेरै काम एकसाथ गर्न सक्ने फ़ूर्तीलो फोन भएकाले यस्ता खाले फोनलाई स्मार्ट फोन पनि भन्न थालियो I सेल फोन अर्थात स्मार्ट फोनको बिकास सन् १९९० को मध्य देखि अर्थात जबदेखि इन्टरनेटको विकास भयो त्यसबखत देखि तीब्र गतिमा भै रहेको छ र यो गतिले झन् झन् तिब्रता पाइरहेको छ I यसिले हो कि, एप्पल, साम्सुंग,, नोकिया जस्ता कैयौं मोबाइल कम्पनीहरुले नयाँ भन्दा नयाँ मोडलहरु बर्षेपिच्छे निकालिरहेका छन् I
स्मार्ट फोन भन्नाले धेरै मल्टीमिडियाको सुबिधाहरु भएको र वायरलेस संचार प्रोटोकलको पनि समर्थन गर्न सक्ने विशेषता भएको मोबाइललाई बुझिन्छ । स्मार्ट फोनमा पनि सबै भन्दा विकसित फोन भनेर आइ फोन लाई बुझिन्छ । आइ फोनको भाउले आकाश छुदाँ पनि सबैजना त्यसैमा आकर्षित हुन्छन । त्यस्तै नन स्मार्ट अथवा फिचर फोन भन्नाले सामान्य फोन लाई बुझिन्छ । जसमा धेरै विशेषताहरु र वायरलेस संचार प्रोटोकल पनि हुदैन । यस्तो फोन लाई एक आधुनिक स्मार्टफोन को विपरीतको रुपमा लिईन्छ । अझ सरल भाषामा भन्नु पर्दा टिकटिके मोबाइललाइ नै नन स्मार्ट फोन भनिन्छ ।
मोबाइलले हरेक मानिसलाई आफु प्रति आकर्षित गर्न सफल भएका छन् । मोबाइल, व्यक्ति र व्यक्तिको दैनिकी जीवन एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित भएर बसिरहेका छन् । मोबाइललाई सबैले आफ्नो मान्छन र भन्दा पनि मेरो मोबाइल भन्ने गर्छन । मोबाइल नचलाउने सायदै कोहि होलान् । बच्चा देखि वृद्ध सम्मले यसको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् ।
२०७५ साल असारको एउटा तथ्यांक अनुसार नेपालमा जनसंख्या भन्दा ३४% बढी मोबाइल संचालनमा छन् । यस हिसाबले नेपालमा मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या कूल जनसंख्या डेढी अर्थात एकजना मानिसले दुइ वा दुइ भन्दा बढी मोबाइल र सिम कार्ड प्रयोग गरिरहेको हुन् सक्ने देखिएको छ । नेपालमा हाल तीन करोड त्रियासी लाख भन्दा बढी मोबाइलहरु संचालनमा छन् ।
विहान उठेर अरु केहि गरोस या नगरोस, अरु केहि हेरोस या नहेरोस तर मोबाइल चाही हेर्ने पर्छ । मोबाइलकै लागि भनेर छुट्टै पैसा छुट्याउनु पर्छ । गाडी भाडा जोगाएर होस् या खाजाको पैसा जोगाएर होस् मोबाइलमा ब्यालेन्स हालिरहेका हुन्छन । कुनै बच्चालाइ फकाउनु पर्यो भने र कसैलाई के ल्याइदिउ अथवा के पठाइदिउ भन्यो भने एउटा मात्रै उत्तर आउछ त्यो हो मोबाइल । अहिले कुनै पनि मोबाइल बोक्ने व्यक्तिले सबैभन्दा धेरै समय बिताउने भनेको नै आफ्नो मोबाइल संग हो । आफ्नो दैनिकीनै मोबाइल र मोबाइलनै दैनिकी भैसकेको छ ।
मोबाइलले गर्दा सबैजना व्यक्तिको स्वभाव र सम्बन्धमा समेत परिवर्तन आएको छ । उसले गर्ने व्यबाहार, सोच्ने तरिका र अभिव्यक्ति गर्ने तरिकामा यो स्पस्ट देख्न सकिन्छ । हामीले गर्ने काममा यसको जरुरत नपरेपनि हामीले साथमा राखिराखेका हुन्छौ । जे काम गर्दा पनि एकछिनको लागि मात्रै किन नहोस मोबाइल हेरेकै हुन्छौ । एउटा अध्ययनको अनुसार ५ मध्ये ४ जना व्यक्तिले हरेक १५ मिनेटमा आफ्नो मोबाइल हेरिरहेका हुन्छन ।नेपालमा आधा भन्दा बढी व्यक्तिहरुले त स्मार्ट फोन चलाउने गर्दछन । ब्रिटिश मनोवैज्ञानिकहरूले गरेको नयाँ अनुसन्धान मा स्मार्टफोनलाई युवाहरुले औसत रूपमा पाँच घण्टा प्रयोग गर्दछन । जुन उनीहरूको कुल जागरण घण्टाको लगभग तेस्रो भाग हुन जान्छ ।
हरेकको हात–हातमा मोबाइल हुन्छ । सबैजना त्यसमै भुलिरहेका हुन्छन् । एउटा तथ्यांक अनुसार १८ वर्ष देखि ४४ वर्ष सम्मका व्यक्ति हरुले सबैभन्दा धेरै समार्ट फोन चलाउने गर्दछन । त्यस्तै प्यू रिसर्च सेन्टरका अनुसार यस वर्षको तथ्यांकमा १३ देखि १७ वर्ष उमेरका ९५ प्रतिशतले स्मार्टफोन चलाउँछन् । स्मार्ट फोन भन्ने वित्तिकै स्क्रिन आउँछ र स्क्रिन र निद्रा लाई एकअर्काका दुश्मन हो भन्ने गरेको पाईन्छ । एउटा झुल्किए, अर्को बेपत्ता । अध्ययनअनुसार स्क्रिनबाट निस्कने निलो प्रकाशले निद्रा लगाउने हर्मोनलाई दबाइदिन्छ । बढी समय स्क्रिनमा बिताउनेलाई निद्रा लाग्दैन भन्नुको कारण पनि त्यहि हो ।
अबेरसम्म स्क्रिनको प्रकाशमा बस्दा मस्तिष्कलाई रात परेको अनुभूति हुँदैन। मस्तिष्कले रातलाई पनि दिउँसै ठान्छ । जसले गर्दा शरीरले ‘मेलाटोनिन’ हर्मोन उत्पादन गर्दैन। हाम्रो शरीरले निद्रा लगाउन एक प्रकारको हर्मोन उत्पादन गरिरहेको हुन्छ, जसलाई ‘मेलाटोनिन’ भनिन्छ । हर्मोन गडबड भएपछि आँखामा निद्रा पर्दैन।मन भुलेपछि आँखामा निद्रा लाग्दैन र भागेको निद्रा सजिलै फर्काउन गाह्रो हुन्छ । निद्रा नपर्नु भनेको आराम गर्ने समय घट्नु मात्र होइन । हर्मोन उत्पादनमा गडबडी हुनुपनि हो । अहिले धेरै जसो मानिसलाई भएको नि यहि हो ।
कुनै पनि व्यक्तिले जुन काम पनि छोटो समयमा गर्यो भने बाकीं समय त्यहि मोबाइललाई दिईरहेको हुन्छ । हामीले आफ्नो नजिकै रहेको मानिस लाई केहि पनि कुरा शेयर गर्नुपर्यो भने आफ्टयारो मान्छौ । तर त्यही कुरा मोबाइलको स्क्रिनमा शेयर गर्न पाउदा दङ्ग पर्छौ । स्क्रिनमा आफुले पोस्ट गरेको कुनै पनि कुरामा लाइक आउदा मख्ख पर्छौ । अहिले कसैले मोबाइल बोक्दीन भन्यो भने मानिसलाई अनौठो लाग्ने समय आईसक्यो ।
आज नेपालको दुर्गम दुर्गम क्षेत्र जहाँ पुर्वाधारहरु अझ भन्नु पर्दा शौचालय सम्म पनि पुगेको छैन, त्यहाँ व्यक्तिहरुको हातहातमा मोबाइल पुगिसकेको छ । आज हरेक व्यक्ति जो विभिन्न कुराबाट वन्चित भएको भन्ने सुनिन्छ । तर सूचना बाट बन्चित भएको भन्ने चाही निकै कम सुन्न पाउनुको कारण पनि मोबाइललाई नै मान्नुपर्छ । सामान्य मोबाइल फोन होस् अथवा स्मार्ट फोन दुबैमा रेडियो, कल तथा म्यासेजको सुबिधा त भईनै हाल्छ । सूचनाको लागि पहिलाको जस्तो धेरै गार्हो छैन । ट्याक्क लाएर मोबाइल हेर्यो भै हाल्छ । आजको सूचना थाहा पाउन भोलिलाई नै पर्खिनु पर्दैन ।